Akşener'den Kanal Istanbul Faallo: 'Tani waa Ficil Ku Saabsan Macallimiinta Istanbul' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulAkşener'den Kanal Istanbul Faallo: 'Tani waa Ficil Ku Saabsan Macallimiinta Magaalada Istanbul'
faallooyinka aksenerden kanaalka istanbul waa ficil barida istanbullular
Guddoomiyaha Xisbiga Wanaagsan Meral Akşener ayaa ka hadlay İstanbul Channel Workshop İ oo ay soo qaban qaabisay IMM. Akşener ayaa yidhi, “Kanaalka ayaan diirada la saarin Istanbul 9 sano. 'Ecdat ecdat' marka loo eego kuwa oranaya jiritaanka aaminaadda Fatih Sultan Mehmet wuxuu tagay sida uu qabo axdiga? No. Ma ogtahay sababta ay tani wax u dhacayaan? Markii loo doortay madaxweynaha Ekrem Maarso 31-keeda. Waxaad xanaaqday jilibka. 23kii Juun, dhammaan reer Istanbul ayaa dib u doortay Ekrem İmamoğlu 804 kun cod. Laba jeer waad xanaaqday jiliblaha. Kani waa fal lagu barayo dadka reer Istanbul.
Gudoomiyaha Xisbiga Wanaagsan Meral Akşener wuxuu kahadlay “Channelstanbul Channel Istanbul Workshop” oo ay soo qaban qaabisay Dowlada Hoose ee Magaaladda Istanbul (IMM). Channel Istanbul Akşener sheegaya in aysan ka qayb lahaa in Turkey iyo Istanbul, ee kooban, ayuu yiri: "Canal Istanbul ee aan diiradda saaray sagaal sano, waxaa loo keenay ina hor ma fahmi karo sababta oo dhan maanta lama filaan ah. Miyaa lagala hadlay saynisyahano kasta? No. Waxaa la dajiyay sagaal sano, maxaase maanta loo dhigay? No. Ma Turkey siin doonaa guulaha weyn? No. Istanbul miyey qaboojin doontaa? No. 'Ecdat ecdat' marka loo eego kuwa oranaya jiritaanka aaminaadda Fatih Sultan Mehmet wuxuu tagay sida uu qabo axdiga? No. Ma ogtahay sababta ay tani wax u dhacayaan? Markii loo doortay madaxweynaha Ekrem Maarso 9-keeda. Waxaad xanaaqday jilibka. 9kii Juun, dhammaan reer Istanbul ayaa dib u doortay Ekrem İmamoğlu 31 kun cod. Laba jeer waad xanaaqday jiliblaha. Tani waa ficilkii waxbarista ee reer Istanbul. ”
“XAGGEE AYUU KUNA SHAQADAAN?
Nereden Xagee bay ka shaqaysay Channelkan? Adiga ayaa sababta ah, Madaxweyne. Hadaadan guuleysan, ma dhici laheyn. Tani waa qaab maamul. Waxaan ula jeedaa, maxaan ula jeedaa? Waan ka xumahay, laakiin Mr. Erdogan wuxuu isku tiriyaa inuu yahay aabaha waddankan. Midkood ma yeelan karo niyadda noocaas ah. La soo doortay, boqortooyadii doorashada ayaa xukuntay, boqornimadiina wax bay xukumeen, fikirka waxaan doonayaa inaan soo baxo, aabaheen, Erdogan, waxaan nahay dadka ka careysiiya dareemahooda. Tani waa in lagu ciqaabo dadka reer Istanbul. Tani waa muujinta aragtida aragtida leh 'Waxaan ahay wax walba oo dalkan jooga'. Waxay leedahay, Awooddu gacantayday ku jirtaa. Waa astaamaha odhaahda, 'Waan garaacayaa qofkasta oo madaxa ah hadaan doonayo.'
“Qofka reer Istanbul wuxuu dhihi doonaa maya Benan aan doonayay, dabeecad ahaan waad arki doontaa waxayna u muuqan doontaa sidii dhagax weyn. Waxaan u tegey inaan saxeexo. Balanqaadka dadka taagan wakhtigaas… The Istanbulite waxay dhihi doonaan maya mashruucan aan la hubin oo ma bixin doono marinka. Waxaan rumeysanahay taas. Dadka reer Istanbul waxay uga jawaabi doonaan ciqaabtan cod ahaan.
88 wax fikrad ah kama leh Channel Istanbul
Kala qaybinta faallooyinka BBC
Madaxweynaha Boostada Altepeden Cable
Maamulaha Guud ee TCDD ee Spain dib u eegis
Mustafa Balkayadan Muhiimad Tababarka Korantada Sare
Kiliçdaroglu "Turjubaan Dugsi Sare": Ka hor dhamaadka nidaamka signalka
Caddaynta doorasho ee Xisbiga Aqalka cad ayaa ku soo noqonaya taraamka gelaya dib u eegista Kocaoglu
Fasiraadda shaqo joojinta ...
Hoos Ka daawo Muuqaalka Xogta Meral